Tag Archive for "Zimbabwe" - African Bulletin
Home > Posts tagged "Zimbabwe"
Zimbabwe: President Mnangagwa pleads for western sanctions removal
Country’s new leader Thursday called on the west to remove economic sanctions imposed on Mugabe-era Zimbabwe as the former British colony begins a new life following former President’s 37-year rule. President Emmerson Mnangagwa addressing ruling party Zanu-PF...
Another 12 000 miners will be ousted over next three years
South Africa’s miner Lonmin and precious metal group Sibanye-Stillwater on Thursday said it could cut more than 12,000 jobs over the next three years after a takeover. South African precious metals miner Sibanye-Stillwater has agreed to buy...
Zimbabwe: Mnangagwa names two Mugabe area officials as acting ministers before new cabinet appointment
President Mnangagwa has dissolved government but appointed two top officials of Mugabe area as acting finance and foreign affairs ministers before unveiling much-awaited new cabinet to bring change to the Southern African country. The new leader according...
Zimbabwe: ‘Mugabe resigned in exchange for protection from prosecution,’ Source aware of negotiation deal
Sacked Vice President Emmerson Mnangagwa has been sworn in as president at the revelations about Robert Mugabe’s Tuesday resignation emerge. Mnangagwa has officially become Friday the second President of Zimbabwe after former President Robert Mugabe stepped down...
Zimbabwe: Sacked Vice President will be inaugurated on Friday
Emmerson Mnangagwa will be inaugurated as country’s President on Friday according state broadcaster ZBC after being sacked two weeks ago by former President Robert Mugabe. Mnangagwa is coming from behind after being sidelined in succession of the...
Zimbabwe: Mugabe’s days in power counted
Defying President Mugabe is facing impeachment after refusing to step down on Sunday despite mounting pressure from the army and within party. The 93-year old President in a speech read on the national television and in presence...
Zimbabwe: Regional SADC grouping to hold meeting on turmoil
Southern regional grouping Southern African Development Community (SADC) is meeting today (Thursday) in Botswana to discuss the political turmoil in Zimbabwe after the military took control of power and put Mugabe under house arrest. Leaders of the...
Zimbabwe: Army favorite Mnangagwa returns to take control of government
Emmerson Mnangagwa, sacked Vice-President has returned from self-imposed South Africa exile to take control government few hours after the army announced it controlled of key state institutions, unconfirmed reports say. Mnangagwa, known as “crocodile” reportedly landed Manyame...
Zimbabwe: Army threats to intervene in purge against revolutionaries within ruling party
The top army commander Constantine Chiwenga Monday sent a strong message to Robert Mugabe and his wife threatening to take charge of the country citing purge against independence veterans within the ruling Zanu-PF. “We must remind those...
Zimbabwe: Mugabe fires Vice-President to propel wife
President Robert Mugabe Monday sacked country’s Vice-President Mnangagwa accused by his wife of plotting a coup against him, a move analysts believe is maneuvered to prepare Grace Mugabe for the pinnacle. Emmerson Mnangagwa was fired over several...